Jean Louis Robinson : Manompa ny TIM sy ny MAGRO
06/08/2018 admintriatra 0
Tsy misy tandroka tokoa ny ratsy! Izay no azo ilazana ny olona tahaka itony dokotera Jean Louis Robinson itony. Ity kandidà natolotry ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013 ity tokoa …Tohiny
Fanafihana : Jiolahy 13 nirongo basy
Andian-jiolahy miisa 13 nirongo basy P.A vita gasy no nanafika tokantrano iray teny amin’iny faritr’Ambohimangakely iny ny faha-4 aogositra lasa teo tokony ho tamin’ny 12h30 alina. Novakian’ireto andian-jiolahy ireto ny varavaran’ny trano, ary nanapoaka basy …Tohiny
Marc Ravalomanana : Tsy manana « Ntsay Christian »
Nahemotra amina daty mbola tsy fantatra ny hetsika saika hataon’i Marc Ravalomanana etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina noho ny tsy fahazoany alalana avy amin’ny prefektiora. Omaly tokoa araka ny efa nambara no tokony ho namory vahoaka …Tohiny
Lozam-pifamoivoizana : Iray maty, enina naratra
Fiarakodia 4×4 marika Rexton iray nitondra olona dimy no niharan’ny lozam-pifamoivoizana nidona tamin’ny hazo ny faha-3 aogositra lasa teo tokony ho tamin’ny 23h30, iray kilometatra an’Andasibe tamin’iny lalam-pirenena faharoa iny. Dokotera avokoa no tao anatin’ity …Tohiny
Mandroso amin’ny fihatsarana hatrany ny fiainan’i Madagasikara amin’ny ankapobeny. Raha natao ny dinika politika niarahan’ny fitondram-panjakana malagasy sy ny vondrona eropeana omaly teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha dia tsy nisalasala ny Ambasadaoron’ity vondrona lehibe ity, Sanchez-Benedito ...Tohiny